Semalt: Ahoana no hanakanana ny tranonkala rehetra ao amin'ny Google Chrome tsy misy fanitarana
Ny fanakanana tranonkala iray dia mety ho tena ilaina amin'ny ankamaroan'ny mpampiasa mpampiasa. Ohatra, ny olona sasany dia afaka manapa-kevitra ny hamehy ny fahazoana miditra ankizy amin'ny tranonkala samihafa. Amin'ny toe-javatra hafa, azonao atao ny mijery ny tranokalan'ny tranonkalanao noho ny antony manokana. Amin'ireny tranga ireny dia mety ho vahaolana ny fampiasana paikady hikatsahana ny tranokala Chrome amin'ny fidirana amin'ireo tranonkala ireo.
I Igor Gamanenko, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt , dia hifantoka amin'ity torolalana ity ao amin'ny tranokala Chrome ho ohatra, fa ireo teknika ireo dia afaka miasa ihany koa amin'ireo navigateurs hafa manaraka fomba fohy hafa.
Ny ankamaroan'ny fanafody misy io olana io dia ahitana fampiharana sy fanitarana. Amin'ny toe-javatra sasany, ny apps sy ny fanitarana tranokala dia mandray ny RAM izay misy fiantraikany amin'ny fampiasana ny ordinatera. Amin'ny tranga hafa, ny fampivelarana sy ny fampiharana dia mety hampihatra ny fanafihana malware, ary koa ny fidirana tsy nahazo alalana hahatonga ny fatiantoka manokana. Ity lahatsoratra SEO ity dia ahitana ny fomba roa tsara indrindra manazava ny fomba hanakanana tranokala tsy misy fampiharana na fampitahana na fampitomboana:
1. Ny tranokala fanakanana ny rakitra miaina
Azo atao ny manakatona ny tranokalan'ny tranokala avy amin'ny rakitra tompony. Ho an'ny olona mampiasa ordinatera windows ianao dia azonao atao ny manakana ireo tranonkala mampiasa ity dingana manaraka ity:
Tsindrio ny bokotra fanombohana
Soraty ny sariohatry ny fikarohana izay "C: \_ Windows \_ system32 \_ drivers \_ etc" ary tsindrio ny hidirana
Tsindrio mahitsy ary sokafy ny rakitra 'tompony' amin'ny fampiasana takelaka iray.
Karazana '127.0.0..1 'eo amin'ny faran'ny doka, avy eo ny habaka sy ny URL an'ny tranonkala tianao hotratrarina.
Aza apetraka ao amin'ny sora-baventy hita ao amin'ity boky ity.
Tsy ilaina ny mampiditra ny "http:" na "www" araka izay tianao hanakanana azy, na inona na inona ilay protocole.
Mamonjy ilay rakitra ary manavao ny solosainao.
Ity fomba ity dia tokony hahomby mba hanakanana ny tranokalanao voatanisa avy amin'ny fidirana Chrome. Ity tròka ity dia mety hiatrika olana ara-pifandraisana hafa. Na izany aza, dia miasa ao amin'ny Windows 7.
2. Tranonkala mibaribary amin'ny Chrome
Ny mpampiasa sasany dia mety mahita fomba teknika etsy ambony mba hampiasana amin'ny ordinatera. Amin'ity tranga ity, afaka mampiasa ny tranonkala Chrome izy ireo mba hamerana ny fidirana amin'ny tranonkala. Azonao atao, ohatra, ny manangana kaonty Chrome mpanampy amin'ny fampiharana ireo filtre amin'ny tranokala. Mba hananganana kaonty mpanara-maso, afaka manaraka ity dingana ity ianao:
Sokafy Chrome ary miverena any amin'ny sehatra.
Raha eo ambanin'ny loha 'olona' dia tsindrio ny 'Add person.'
Ampiasao ilay olona eo amin'ny toerana "Control ary jereo ny tranonkala ity olona ity"
Hatramin'izao, afaka mifehy ny tranokala ianao amin'ny fampiasana ny fitaovana ampiasain'ny mpampiasa anao.
Ireo tranonkala dia azo voasakana ao amin'ny sehatra 'zana-tsoratra' ao amin'ny sehatra 'fitantanana tranokala'.
Raha mampiasa ny aterineto dia mety misy ny filàna sasany hamerana ny fidirana amin'ny tranonkala iray amin'ny navigateur. Amin'ireny tranga ireny dia mampiasa fomba isan-karazany ny olona mba hamerana ny fidirana amin'ireo tranokala ireo. Ireo teknikam-pifandraisana mahazatra hanakanana ny fidirana amin'ny tranokala dia mety hampiditra ny fanitarana ny tranokala mba hanatanterahana io asa io. Ny olon-kafa mampiasa fampiharana PC izay manampy ny navigateur hamerana ny fitsidihana tranonkala sasany. Ireo vahaolana ireo dia manana tsy fahampian'ny fiarovana amin'ny aterineto sy ny fahombiazan'ny solosaina. Ity fitsipika SEO ity dia misy fomba fitsaboana ny tranokala mampiasa fomba isan-karazany. Azonao atao ny mianatra ny teknikan'ny tanana na manakana ny fidirana amin'ny tranonkala iray avy amin'ny rakitra maromaro Source .